Waaxda badeedacaha ee Germany oo ka digtay midhaha lagu qureecdo iyo maraqa diyaarka ah - Horn Future
Waaxda badeedacaha ee Germany oo ka digtay midhaha lagu qureecdo iyo maraqa diyaarka ah
Waaxda baadhitaanka badeedacaha ee Germany ayaa ka digtay cuntada qureecda la cuno ee ka sameeysan midhaha heeda iyo qamadida iyo maraqa hore diyaariyay .
Waxa waaxdani war bixin ay soo saartay kaga dhigtay inay dhici karto in cuntootinkan ay noqon karaan bambooyin sonkor ah oo dhab ah,kuwaas oo ay ku jiraan tiro badan oo sonkor ah.
Waaxdan ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyay mid kamid ah cuntooyinka ka sameeysan midhaha sida heeda iyo qamadida ee lagu qureecdo kuwaas oo baadhitaan ay sameeysay ay sugtay inay ku jirto tahay 43% oo ah sonkorta lagu daro marka cuntada la sameeynayo ,raashinka ka kooban (60 gram) ilmuhu waxa uu cunaa 8 xabbadood oo sonkor ah, (xabadii sonkorta ah waxa ay u dhigantaa ku dhawaad 3 gram).
Taas badilkeeda,waxa doorashada kale ee ugu fiican ay tahay “muesli” ga la isku daro oo aqalka lagu diyaariyo, kaas oo ka kooban midhaha (oats) ee u eg sareenka iyo khudaarta la engejiyay/qalajiyay, kuwaas oo sidoo kale leh xooggaa dhadhan macaan.
Xeel-dheerayaasha Germany ayaa waxa ay intaa ku dareen in waxyaabaha laga sameeyo caanaha ay soo galayaan qaybta 2aad ee kale oo badanaa lagu daro sonkorta cuntada lagu daro marka la sameeynayo,waxana baadhitaan lagu sameeyay 15 badeecadood oo ah badeecadaha caanaha ah, oo badh kamid ah ay ku jiraan 4 xabadood oo sonkor ah halkii koob,iyadoo aanan loo eegin sonkorta dabiiciga ah ee ku jirta caanaha iyo midhaha khudaarta.
Waxa doorashada fiican ay tahay ee lagu badili karo caanaha gadhoodhka/ciirta ah ee loo yaqaano( yogurt)ka ee dabiiciga ah,waxana dhadhankooda lagaga dhigi karaa macaan iyadoo lagu darayo qaar ka mid ah oo ah midhaha khudaarta ama mulqaacad/qaadada shaaha oo jam/marmalaado ah.
Waxa sidoo kale loo baahan yahay in laga digtoonaado maraqa diyaarka ah oo ay ku jirto sonkorta lagu daro cuntada,waxana ay muujiyeen natiijooyinka baadhitaankani in qaar kamid ah maraqa loo yaqaano (barbeque) BBQ) in ay ku jirto saddex xabbadood oo sonkor ah halkii mulqaacad/qaado oo maraqan ah iyo” ketchup “ka oo ah iyo hal iyo badh marka lagu daro.
Waxa xeel-dheerayaashani ay kula taliyeen kuwa aanan doonaynin inay ka iska daayaan badeecadahan inay hoos ugu dhigaan badeecadaha kale ee dabiiciga ah sida caanaha gadhoodhka/ciirta ah ee loo yaqaano( yogurt) ama timaadka casiirka ah.
« Australia oo baadhaysa muuqaal ku saabsan ilmo yar oo ku hanjabaya inuu qaadayo weeraro	» North Korea threatens to sink US submarine